Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch 2020 (Black)-13 ~ ICT.com.mm
HomeApple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch 2020 (Black)-13
Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch 2020 (Black)-13
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Compatibility: iPad Pro 11-inch (1st Gen, 2nd Gen) Full‑size, backlit keys andascissor mechanism with 1 mm travel for quiet, responsive typing. Designed for Multi‑Touch gestures and the... [Learn more]
Brand: AppleSKU: 167707N/ASee more: Apple, Apple Accessories, Apple Promo, Computer Accessories, Computer Systems, Deals, iCare, New Arrivals, Products, Shop, WarehouseFilter by: iCare, Keyboards, Mice, Promotion, Warehouse
Compatibility: iPad Pro 11-inch (1st Gen, 2nd Gen)
A USB‑C port for passthrough charging, and front and back protection.
The Magic Keyboard hasafloating cantilever design, allowing you to attach iPad Pro magnetically and to smoothly adjust it to the perfect viewing angle for you.
iPad Pro (11”) 2nd Gen နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Apple Magic Keyboard 2020 ဖြစ်ပါတယ်။ Full Size အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Backlit ကီးတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Magic Keyboard ရဲ့ နည်းပညာသစ်ဖြစ်တဲ့ Scissor Mechanism ကိုအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အသံတိုးတိုးနဲ့ ရိုက်နှိပ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကီးဘုတ်မှာ Trackpad တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ iPadOS မှာ ပါဝင်တဲ့ Multi-Touch Gestures နဲ့ Cursor တို့ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးထားပါတယ်။ iPad Pro ကို မိမိနှစ်သက်ရာ မြင်ကွင်း အနေအထားရရှိအောင် နောက်ခံကာဗာအနေအထားကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ iPad Pro ကို အားသွင်းပေးနိုင်တဲ့ USB-C port ပါဝင်တာကြောင့် iPad Pro က USB port ကို အခြားတွဲဖက်ပစ္စည်းတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ iPad Pro ရဲ့ ရှေ့ဘက်နဲ့ ကျောဘက်နှစ်ခုလုံးကို လုံခြုံစွာကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ iPad Pro ကို Laptop တစ်လုံးကဲ့သို့ အသုံးပြုချင်သူတွေအတွက် လုံးဝအသုံးတည့်တဲ့ Magic Keyboard ဖြစ်ပါတယ်။
Total price:K542,567 K494,641
This item: Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch 2020 (Black)-13 K483,000 K458,900